प्रेममा जात र धर्म तगारो भएपछि ......! - koselihk
प्रेममा जात र धर्म तगारो भएपछि ……!
Posted by koselihk | १५ बैशाख २०७४, शुक्रबार १४:४१ | समाचार |0|
“प्रेममा जात र धर्म तगारो भएपछि ……! ” गोपाल क़ाफ्ले,
मोरङ। मन र मिलेपछि विवाह गर्न दन त जातले रोक्छ न धर्मले । तर, हाम्रो सामाजिक संस्कार अझै पनि जात धर्मका नाममा कसैको घरमा आगो लगाएको हेरिरहेको छ बिएड तेस्रो वर्षमा पढ्दै गरेका दुई बहिरा नबोल्न सक्छन न कान सुन्न सक्छन्।
मिति २०७२ माघ ४ मा यस्तै भयो। मोरङको पथरी शनिश्चरे १ का अनिल खत्री र बेलबारी ४ की अक्सना खातुनबीच प्रेम बिवाह भयो। अक्सनाको परिवारले भाड्न खोज्दा अनिलले अक्सनालाई आफ्नो घरमा बेहुली बनाएर भित्र्याउने समाजको मात्र होइन ,प्रहरी प्रशासनको पनि मद्दत लिनु परेको थियो। यति हुँदा हुँदै पनि बोल्न नसक्ने अनिललाई केटी पक्षले दबाब दिइरहे। अनिल र अक्सना दुबै समान खाले अपाङ्गता भएका ब्यक्ति हुन्। उनीहरू काठमाडौंस्थित नक्साल बहिरा स्कुलमा बिएड सँगै पढका थिए।
अनिल र अक्सना हाल विएड तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। मात्र आवाज बिहिन उनीहरूले २०७२ माघ १ गते झापाको कन्काई माईमा लाखौं भक्तजनलाई साक्षी राखेर सँगै जिउने ,सँगै मर्ने कसम खाएका थिए। तर,उनीहरूको प्रेम यात्रामा धर्मको तगारो लागेपछि अनील र अक्सना संकटमा परेका छन्। २०७२ साल माघमा अक्सनाकी आमाले हिन्दु र मुसलमानको बिबाह हुनै सक्दैन भन्दै ४ दिन सम्म छुटाउने प्रयास गरेकी थिइन्। ईलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले केटीलाई केटासँग जिम्मा लगाएर पठाउँदा केटीपक्षले प्रहरीमाथि हात समेत उठाएको थियो। अक्सनालाई जन्मिदै भगवानले ठगे, जीवन साथी रोज्दा प्रहरी थुनामा रात काट्नु पर्‍यो, विवाह त भयो तर सम्बन्ध टुटाई छाडे अक्सनाको माईतीले, फेरि धर्मको आड लिएर बाबु आमाले ठग्दै छन्।
उता बाबु मोहम्मद खातुनले बेलबारी प्रहरीमा छोरी हराएको जाहेरी दर्ता गराएका थिए। सोही आधारमा पथरी इलाकाले केटा केटीलाई प्रहरी कार्यालयमा झिकाई एक आपसमा छलफल चलाउँदा केटाकेटी दुबै पढे लेखेका भएका र राजी खुसीनै विवाह गरेको बताएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई कसैको दवावमा पनि छुटाउन नसकिने बताएको थियो। केटीका बाबु आमाले ४ दिनसम्म छोरी छुटाउने प्रयास गर्दा पनि छोरी छुटिन नमानेपछि उनिहरूले सामाजिक चलन अनुसार साइत हेरि विवाह गरिदिए। ‘हाम्रो प्रेम चोखो र पवित्र छ। यो सम्बन्धलाई भगवान आए पनि छुटाउन सक्दैन,’ उनीहरूले सांकेतिक र लेखेर प्रतिक्रिया दिए। समाजको कुरिति र धर्मलाई तोड्दै आफूहरूले विवाह गरेको अक्सनाले बताइन्। ‘हामी धर्म वा जातको आडमा पवित्र प्रेमलाई तोड्न सक्दैनौ,’ कापीका पानामा लेखेर उनले प्रतिक्रिया दिइन्।
उनले आफूहरू हिन्दू र मुस्लिम भएको थाहा पाएरै बिवाह गरेको समेत बताए। केटीका बाबुले केटा पक्षलाई आफ्नी छोरी नबुझाए मार्ने सम्म धम्की दिएका थिए। यता अनिलका बाबु ठम्बर बहादुर खत्रीले भने बुहारीलाई छोरी समान अवसर दिएर पालन पोषण गरेका गरेको प्रतिक्रिया दिए। इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी र बेलबारीमा दुई दिनसम्म छलफल गर्दा पनि केटीका अभिभावकले केटी छुटाउने जिकिर गरि रहेपछि प्रहरीले केटाकेटीको अभिमत बुझेर केटालाई केटी जिम्मा लगाइदिएका थिए।
Previousचाईना हङकङ नेसनल तेक्वान्दो एलिएन्सद्वारा आयोजित तेक्वान्दो प्रतिष्प्रधामा फरेनर्स हङ्कङ तेक्वान्दोको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन!
Nextहङकङमा पैदलयात्रीलाई झापड हान्दै भाग्दै गर्ने सेन्जेन वे को कन्ट्रोल पोईन्टमा पक्राउ..।
जनताले पाउने न्युनतम अधिकारवाट अझै वञ्चितछन नेपाली जनताहरु” एकै घरका ७ जना बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्”
चीनले आपत्कालीन सहायतास्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
३१ श्रावण २०७४, मंगलवार १६:०७
गायक बने गितकार डि.पी.खनाल
१६ असार २०७३, बिहीबार १६:१३
भानु स्मारक संग्राहलय सहयोगार्थ “तनहुँ बाराही साँझ”
१५ बैशाख २०७३, बुधबार २२:५६